★မြန်မာ့အလင်း★: ဒီမိုတို့အတွက် ခေါင်းဆောင်သစ် (သို့မဟုတ်) မြအေးသမီး
ဒီမိုတို့အတွက် ခေါင်းဆောင်သစ် (သို့မဟုတ်) မြအေးသမီး
ကုလားမလို ပါတီအစည်းအဝေးမှာ စကားပြောဖို့ ဘာသတ္တိုရှိဖို့လိုသလဲ? အဲလိုတက်ပြောဖို့ မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ကုလားမကိုရွေးချယ်တာလား? အဲဒါကိုဖြေကြည့်လေ။ ဒီမိုငတုံးတွေက ကုလားမ အင်္ဂလိပ်လို ပြောသံလဲကြားရော လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ကုလားမချီးကိုစားပါ။ ကုလားမသေးကို သောက်ပါဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ကုလားမဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါဆိုပြီးလဲပြောနေတယ်။ တကယ်စွန့်စားနေတဲ့သူတွေက ပါးစပ်နဲ့ ပြောနေတဲ့ ကုလားမတစ်ကောင် လောက်တောင် အရေးမပါဘူးဖြစ်ကုန်တယ်။
အခုလည်း သူ့အသံက ဒီမိုတွေအပေါ် ထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ အသံဖိုင်ဆိုပြီး ပို့နေတယ်။ အသံဘက်ကို အရမ်းကို အလေးထားနေတယ်နော်။ အသံနဲ့ ဆွဲဆောင်လို့ရလို့ အသံနဲ့ လုပ်စားနေတာ ။ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချမယ့် အနေအထားပဲ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အဆိုတော်တွေလို အသံကောင်းဖို့က အဓိက မဟုတ်ဘူး။ အသံကောင်းလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ လူပိန်းအလုပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားလဲ အရေးမကြီးဘူး။ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ သတ္တိုတွေက အဓိကဖြစ်တယ်။ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘလော့ထောင်ပါ။ အဲဒီဘလော့ပေါ်မှာ သူရဲ့အကြံအစည်တွေကို ချပြလေ။ မဟုတ်ဘူးလား?
စဉ်းစာစရာက သူ့ကို အဲလိုအသံရအောင် ဘယ်သူတွေက လေ့ကျင့်ပေးတာလဲ? သူ့ဖာသာ ကြိုးစားပြီးရတယ်ဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးတော့ မလုပ်နဲ့။ သူ့ကို စံနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ် ။ နောက်ပြီး ဒီနေရာရောက်အောင် ဘယ်သူတွေက ပံ့ပိုးနေတာလဲ? ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်. . . . နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးဆွဲတွေရှိနေတယ်။ ၁၆ ရက်နေ့မှာလဲ ခုံချပြမယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီနေ့မှာ ဒီမိုမီဒီယာတွေက တွန်းတင်ပွဲလုပ်ဦးမှာပဲ။ (အထက်မှာမြင်တယ် မဟုတ်လား? ) အလှူငွေတွေ ကိုယ့်ဖာသာ ထည့်ပြီး ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်ဦးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးရင် ကုလားမက သံရုံးရှေ့မှာ ဦးဆောင် ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ လာပါလိမ့်မယ်။ အမတ်တွေနဲ့လည်း စကားတွေ ပြောပါလိမ့်မယ်။
ပုံစံကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခိုးကူးဖို့ ကြိုးစားနေဟန်ပေါ်တယ်။ မြအေးကို ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ ၀ိုင်းပြီး လိမ်ပေးထားတယ်။ ကုလားမြအေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ထက် လူထုက ပိုပြီးလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူးတယ် မဟုတ်လား? သူ့သမီးက သူ့အဖေတာဝန်ကို ဆက်ပြီးထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ အကွက်ကို စီမံနေတာ သိသာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာမှာ ကုလားမြအေး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှာ ကုလားမကို အစားထိုးဖို့လုပ်နေတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။ ဒီမိုငတုံးတွေအတွက် ခေါင်းဆောင်အသစ်ကို ဖန်တီးနေပြီဆိုတာ မြင်သာနေပါပြီ။ မကြာမီမှာ မြန်မာ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ မဝေနှင်းပွင့်သုန် ဆိုတဲ့စကားကို ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာ ဆက်တိုက်ကြား လာရတော့မှာပါ။ စောင့်ကြည့်ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:44 AM
မူဆလင်မြအေးသည် ၈၈၈၈ တုန်းကကျောင်းသားတဦးမဟုတ်တော.ပါ။ ၈၈၈၈ အေ၇းတော်ပုံအတွင်းမြအေးဘာလုပ်
သလဲဆိုတော.မြအေးဘာမှမလုပ်ပါ။ ၈၈၈၈ အေ၇းတော်ပုံတုန်းကပေါ်ထွက်လာသောထင်၇ှားသောကျောင်းသားများ
ုဖြစ်သော မင်းကိုနိုင်နှင်.မိုးသီးဇွန် တို.ကို ၈၈၈၈ တုန်းကမြအေးအမည်ကြားဘူးသလား၊မြအေးနှင်.လက်တွဲလုပ်ဘူးသ
ုကြည်.။ငါ၊သူ.ကို ၈၈၈၈ တုန်းကကြားဘူးလား...နိုး..။ငါ၊သူနဲ.လက်တွဲလုပ်ဘူးလား...နိုး။ ခဏခဏ၇ွတ်ပြီးကိုယ်ဘာသာ
၈၈၈၈ လုံးနောက်ပိုင်းကိုကြည်.လိုက်ပြန်လျှင်ဒေါ်စုကိုဝိုင်း၇ံသောကျောင်းသား၊လူထုထဲတွင် ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်း
တပုံမှအင်တာနက်စာမျက်နှာများမှာမတင်နိုင်ခြင်းကဘဲကိုမြအေးinternationalဆုတဆု၇ဖို.အသဲအသန်ကြော်ငြာထိုးနေ၇တဲ.UKေ၇ာက်မြန်မာမူဆလိမ်များအတွက် ဘားမားဒိုင်ဂျက်(အမှန်တကယ်ဆိုUKေ၇ာက်မူဆလိမ်များ၇ဲ.မြန်မာလူမျိုးများ
ကိုလှည်.စား၇န်ပြုလုပ်တဲ.အဖွဲ.သာဖြစ်တယ်၊ကပ်ပြီးဖြီးထားတာကတော. world ဒိုင်ဂျက်၇ဲ.အသင်းဝင်ဆိုပြီးအတင်း
ဘယ်ချောင်မှာတုန်းဟုမေးလျှင်၊ယခုနိုင်ငံေ၇းလုပ်နေသောမင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီးအစ၇ှိသော ၈၈၈၈ လုံးကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင်များ၊ယခုပြည်ပေ၇ာက်ဟိုယောင်ယောင်၊ဒီယောင်ယောင်၊သူများေ၇ာင်၍လိုက်ေ၇ာင်နေ၇သော ၈၈၈၈ အ
သူတို.၇ဲ.၇ည်၇ွယ်ချက်ကဘွဲ.၇ကျောင်းသားအမည်ကိုသုံး၇င် ၉၀ေ၇ွးကောက်ပွဲမှာနေ၇ာတခုများချိတ်မလား
ဆိုပြီးသူတို.ဘွဲ.၇မူဆလင်တစုထလုပ်တာ၊ကျောင်းသားဆိုအဲဒီအချိန်ကအသေကြောက်တဲ. နအဖ က
၁၉၈၉ ကထောင်ထဲေ၇ာက်တဲ.မြအေး၁၉၉၆ မှာထောင်ကလွတ်တယ်။ကြောက်လန်.သွားပြီး ၁၁ နှစ်လုံးလုံးငြိမ်နေ
တယ်။ ၂၀၀၆ ကုန်ခါနီး (သို.) ၂၀၀၇ အစလောက်ထင်တယ်၊ဝေနှင်းပွင်.သုန်အင်္ဂလန်ကိုစာသင်ဖို.ပို.တယ်။
၁၉၉၆ ကတည်းက ၁၁ နှစ်လုံးလုံးငြိမ်နေခဲ.တဲ.မြအေးက ၂၀၀၇ မှာသမီးနိုင်ငံေ၇းခိုလှုံတာကိုအဆင်ပြေ
အောင်၊သက်သေပြလို.၇အောင်လို. ၈၈၈၈ လုံးခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးနဲ.ပူးတွဲတွဲလုပ်တယ်။မြအေးမှာကိုကို
မပြောနိုင်တဲ. ၈၈ ဘလော.ဂါတွေတင်ပေးလိုက်တာနေ၇ာ၇နေတယ်ဆို၇မှာ၊လေအကျိုးပြုတယ်ဆို၇မလား။
လေနဲ.လုပ်စားသွားတာ၊သူတင်ထားတဲ youtube ၇ဲ.၈၀ ၇ာနှုံးကသူတို.ဘာသာသူတို.၇ိုက်ပြီးအင်တာဗျူး
*၁၉၉၆ မှာပြန်လွတ်တယ်။ ၁၁ နှစ်လုံးလုံးဘာသံမှမကြား၇ဘူး။
*၂၀၀၆ နှစ်ကုန်(သို.)၂၀၀၇ ဆန်းလောက်မှာဝေနှင်းပွင်.သုန်UKသွားကျောင်းတက်၇ာမှနိုင်ငံေ၇းခိုလှုံခွင်.လျှောက်တယ်။
*၂၀၀၇ မှာဝေနှင်းပွင်.သုန်နိုင်ငံေ၇းခိုလှုံေ၇းလျောက်ထားစဉ်ကာလဘဲမြအေးဗြုံးတိုင်းကြီးပေါ်ထွက်လာပြီး၊၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးနဲ.ေ၇ာ၊ေ၇ာလုပ်တယ်။၇ှား၇ှားပါးပါး၊ကိုကိုကြီးတို.ပါတဲ.မော်ကွန်းတင်စ၇ာဓါတ်ပုံလေးတပုံ၇ိုက်ထားတာမူဆလင်ဝက်ဆိုဒ်နဲ.တချို.ဘလော.တွေမှာပြန်လာတယ်။မြအေးကို၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပါဆိုပြီးအင်တာနက်မှာဖြန်.လာကြတယ်။ ကိုကိုကြီးအဖမ်းခံတောမြအေးလဲကပ်ပြီးပါသွားတယ်။
အေး..............ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူုလေးက အင်္ဂလိပ်စကားတော့ ပြောတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော်..မှတ်ထား ကိုယ့်လူတို့ရယ်... အမေကိုကျော်ပြီး ဒွေးတော်ကို မလွမ်းရဘူးတဲ့နော်၊ မျိုးဆက်သစ်ဆိုတာကတော့ လိုအပ်ပါတယ် အများကြီးလိုအပ်နေပါတယ် နေရာတွေလည်း ပေးကြရမယ်လေ။၊ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တာ ပညာတတ်တာတော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတိုင်းက အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနေကြတာကိုး၊ သူတို့လေးတွေ အကုန်လုံး ပညာရှိတွေမဟုတ်ကြဘူးလေ၊ ဘာသာစကားကို ပြောတတ်တဲ့ လူကို တတ်တယ်လို့ပဲ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်၊ သိပ်တော့ ထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူုး၊ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်၊ အခုမှ စပြီးလုပ်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်တုန်းက စခဲ့တာလဲ နောက်နောင် ဘယ်လောက်ထိ ဆက်လုပ်မလဲပေါ့..။ အကျိုးဆက်က ဘာလဲပေါ့လေ၊ ဒါတွေကို သိပါ သိအောင်လည်း လုပ်ပါ သိပ်ပြီးတော့လည်း Open mind တွေကို မလိုအပ်ပဲ မထားကြပါနဲ့ ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရွာဦးကျောင်းမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် တင်ဖို့ ရှိပါတယ် စောင့်မျော်ကြပါ။ ဆရာတော်ကတော့ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၈၈ ဆိုတာကိုလည်း မမီိလိုက်ပါဘူး၊ ကြားတော့ ကြားဖူးတာပေါ့၊ အဓိကကတော့ မီးစရာလည်း မလိုလောက်ပါဘူးလို့ ထင်တယ်လေ၊ မီးတာမမီတာကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး၊ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာပဲ စိတ်ဝင်းစားပါတယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ လူ့လောကကို ရောက်တာနောက်ကျလို့ ဘာကိုမှမမီခဲ့ဘူုးဆိုရင်တောင် မီိတဲ့ နေရာက လိုက်မယ်ပေါ့လေ။ သတိတော့ထားကြနော်၊ အသွင်မတူရင် ရလဒ်ကွဲတတ်တယ်၊ ရလဒ်တူရင်တောင် ဦင်္းတည်ချက်က တူမှာမဟုတ်ဘူး ဒကာတို့ရယ်...............။ ရွာဦင်္းကျောင်းကို လာလည်ကြဗျာ့။
In short, Bristish labour party had well used of the young girl to start penetrating the internal affairs of Burma ( Myanmar) like in the past when they also used AFPFL and Burma’s inexperienced socialists leaders in making the Independence only due to the wishes of British labour party’s policy. The 1947 constitution was drawn and enacted with the agreement of the British Labour Party, which was in power then, to enforce socialism in Burma and make the policy of secession by minority ethnics from the main land that is for planting the civil war within three months soon after its independence.